Izindleko ezinkulu kunazo zonke ze-digital ngo-2021. Uhlu oluphezulu lwemali yedijithali ngemakethe yemakethe October 2021 ngokubiza kwentengo yazo zonke izinhlamvu zemali ezikhishwe (ukukhishwa) ezimakethe zemali yedijithali.
Uhlu lwezimali zedijithali ngamakethe emakethe October 2021
Idijithi yemali yeDividenti
Bitcoin (BITCOIN) 1 165 716 036 793 $
Ethereum (ETH) 447 539 185 817 $
Binance Coin (BNB) 81 019 623 191 $
Cardano (ADA) 70 074 474 702 $
Tether (USDT) 69 022 637 624 $
XRP (XRP) 51 165 906 521 $
Solana (SOL) 47 239 699 120 $
Polkadot (POLKADOT) 40 432 014 672 $
USD Coin (USDC) 32 661 478 600 $
Dogecoin (DOGE) 32 450 748 143 $
I-idijithali yemali enkulu kunazo zonke yinsizakalo yewebhusayithi ye-ptptoratesxe.com ekhombisa ama-izimali zeDividenti aphezulu ngokukhishwa okuphezulu, inani layo yonke imali ekhishiwe.
Insizakalo eku-inthanethi "i-idijithali yemali enkulu" isebenzisa imithombo evulekile evela ekushintshaniseni kwe-idijithali yemali futhi ibonisa isilinganiso sama-izimali zeDividenti amakhulu ngesikhathi sangempela.
I-idijithali yemali enkulu ibhekwa ngezindleko zazo zonke izinhlamvu zemali ezenziwe yilesi sikhathi se-idijithali yemali. Kuyadingeka ukuhlukanisa inani lohlamvu lwemali olulodwa kunani lazo zonke izinhlamvu zemali kanye nokwenziwa kwemali nge-cryptocur lwemali.
Ngokungafani "Imali enkulu yedijithali", ekhombisa inani lazo zonke izinhlamvu zemali ze-crypto, Imali edidayo kakhulu yedijithi insiza ikhombisa i-crypto ngenani eliphakeme lohlamvu lwemali olulodwa.
Ukulinganisa kwama-cryptocurrensets amakhulu kakhulu kuguquka ku-inthanethi, ngoba ukuhwebelana ngokushintshaniswa kwe-idijithali yemali kuyaqhubeka, futhi izinga le-idijithali yemali liyashintsha. Inombolo yezinhlamvu zemali ekhishwe, inkinga nayo ayigcini.
Sebenzisa insiza "enkulu kunazo zonke" nge-inthanethi futhi mahhala.
Uhlu lwama-cryptocurrensets amakhulu kakhulu we- October 2021
Uhlu lwama-cryptocurrensets amakhulu kakhulu we- October 2021 imelelwa ukukhethwa kwama-cryptos ayi-10 ekuhleleni i-oda kusuka kokukhulu kuya kokuncane, ekwehliseni kwe-capital of capitalization.
Usayizi noma inani le-crypto wethulwa ngamadola ukuqhathanisa kalula.
Ukulinganiswa kwama-cryptocurrensets amakhulu kunikelwa i October 2021. I-capitalisation ibhekwa njalo ngomsebenzi wethu.
Vakashela iwebsite yethu futhi usebenzise insizakalo yama-izimali zeDividenti aphezulu amakhulu we October 2021.
Imali enkulu yedijithali 2021
I-idijithali yemali enkulu kakhulu ye- 2021 insizakalo yethu yewebhusayithi yamahhala ekhombisa ama-izimali zeDividenti amakhulu ama- 2021.
Kuza isampula yama-cryptos amakhulu 2021, kepha sihlola ngokuningiliziwe izinyanga ezi-3 zokugcina zokwenza imali. Izinga nokukhishwa kwe-crypto kungashintsha nsuku zonke, ngakhoke isilinganiso sethu esiphezulu "Imali edidayo kakhulu yedijithi 2021" ingashintsha nsuku zonke.
Ama-Izimali zeDividenti ngokuphuma okukhulu.
Ama-Izimali zeDividenti ngokukhishwa okuphezulu - isilinganiso sethu sokuhlola inani lazo zonke izinhlamvu zemali ze-idijithali yemali ngayinye. Uhlamvu lwemali luyinto evamile yokubala. Kuyacaca ukuthi ungakhokha kanye nengxenye yezinhlamvu zemali.
Ngakho-ke, ukukalwa kwama-izimali zeDividenti ngenani eliphezulu lazo zonke izinhlamvu zemali noma ukukalwa kwama-izimali zeDividenti amakhulu kunemibandela.
Ngokungeziwe ngosayizi we-idijithali yemali, kufanelekile ukubheka inani lokukhokhelwa kulezi zinhlamvu zemali kanye nenani labasebenzisi be-crypto enkulu.
Ithebula lama-izimali zeDividenti amakhulu.
Ithebula lama-cryptocurrensets amakhulu - ngumbono wethu obonisa isilinganiso esiphezulu se-crypto enkulu.
Etafuleni le-crypto enkulu kunazo zonke ungabona igama le-idijithali yemali kanye nezinga lokushintshana kwayo ngamadola aseMelika.
Uma uqhafaza kwenye yama-izimali zeDividenti amakhulu kakhulu etafuleni, uzothathelwa ekhasini elinemininingwane eningilizayo ngodaba kanye nezindleko zawo wonke ama-izimali zeDividenti alemali.
Ishadi lama-izimali zeDividenti amakhulu.
Ishadi elikhulu kakhulu le-idijithali yemali kungenye ithuluzi lamahhala eliku-inthanethi elibonisa amazinga aphezulu ama-izimali zeDividenti amakhulu.
Ishadi lama-izimali zeDividenti amakhulu kakhulu libonisa inani lemali ephezulu ye-10 yezindleko zokuphuma.